« Eco-école » – Mpianatra roa hisolo tena an’i Madagasikara any Maorisy
Published by Book News on September 5, 2019 September 5, 2019
Mpianatra roa avy amin’ny Lycée Sabotsy Namehana no nandrombaka ny amboara tamin’ny tetikasa “Eco-Ecole”, ka hifaninana any Maorisy amin’ireo tetikasa mahakasika ny angovo azo havaozina.
Mpianatra solontenan’i Madagasikara
Hitondra avo ny voninahitr’i Madagasikara ireo mpianatra hisolo tena ny Nosy amin’ny fifaninanana any Maorisy.
Mpianatra roa mianadahy avy ao amin’ny Lycée Sabotsy Namehana no nanainga any Maorisy ny herinandro lasa teo rehefa naharesy tamin’ny fifaninanana mahakasika ny angovo azo havaozina.
Araka ny loharanom-baovao dia ny tetikasa izay nentin’ireto ankizy ireto no nahazo ny laharana voalohany tamin’izany ary nialohan’ny niatrehan’izy ireo ny fifaninana tany ivelany dia nisy tetik’asa 14 nifaninana teto Madagasikara ka ny Lycée Sabotsy Namehana no nandresy tamin’izany izay nokarakarain’ny tetikasa « Eco-Ecole », izay mpandrindra izany ihany koa.
Ity farany izay tetikasa eo anivon’ny ministeran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ary ny ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena. Araka ny fantatra dia efa 5 taona no no nisiany teto Madagasikara, ary miara-miasa amin’ireo sekoly fanabeazana fototra ny roa tonta amin’izany.
Misy comity nasionaly mandrindra ny tetikasa “Eco-Ecole” eto Madagasikara izay ivondronan’ny ministeran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena ary ireo mpisehatra amin’ny Tontolo iainana.
Ny “Eco-Ecole” dia tetikasa iaraha-miasa amin’ireo sekoly anabeazana ireo ankizy hitia sy hiaro ny tontolo iainana ary amolavolana azy ireo hikaroka tetikasa mikajy ny tontolo iainana.
Lions Club Antananarivo Salanitra a remis des dons aux habitants d’Ambohimiadana le dimanche 06 septembre 2020. Remise de dons La population locale d’Ambohimiadana a reçu des dons offerts par les membres du Lions Club Antananarivo Read more…
Mpandraharaha ara-bola madinika – Miantso ny Fanjakana hamaha ny olana ny IMF
Mitohy hatrany ny antso ataon’ny IMF ho fanohanan’ny Fanjakana ny sehatra misy azy ireo. Misedra olana ny IMF Toy ny sehatra hafa ihany dia misedra fahasahiranana vokatry ny krizy ara-pahasalamana ny rafitra mpandraharaha ara-bola madinika Read more…
Le Lions Club Antananarivo Salanitra a remis des dons de vivres et d’Equipements de protection intégrée pour 20 travailleurs de santé du CSB II Andoharanofotsy. Remise de dons Le Lions Club Antananarivo Salanitra a procédé, Read more…